Resaky ny mpitsimpona akotry : fanjifana vokatra avy eto an-toerana (NewsMada) | AEMW
Resaky ny mpitsimpona akotry : fanjifana vokatra avy eto an-toerana (NewsMada)
Mitaraina ary an-drariny ny mpandraharaha eto an- toerana noho ny tsy fahampian’ny fitsinjovana azy ireo avy amin’ ny fanjakana. Tsy mitomany fepetra hanomezana azy tombon-dalana mba hahitany tombotsoa manokana izy ireo. Ny hany takiny dia ny fanajanonana ny fanaovana tombo sy hala, ka ny entana avy any ivelany indray no omena vahana eto amin’ny tsenan’ny tena. Na ny lambahoany izay fahiny vokarin’ny orinasa teto an-toerana dia hafarana any ivelany ankehitriny. Miady mafy koa matoa mbola misy mijoro ny ozinina toy ny famokarana savony na labozia… Araka ny filazan’ ny mpitantana azy ireny dia vely kibay ny haba ampiharina amin’ny akora hafaran’izy ireny avy any ivelany. Eo andaniny anefa tsy mitovy amin’ izay fa malefaka kokoa ny haba takina amin’ny fampidirana entana avy any ankoatran’ny ranomasina, entana izay tonga hifaninana amin’ireo vita malagasy.
Vola mivoaka avy any amin’ny paosin’ny tena, na inona na inona fitiavana hividy ny vokatra avy eto an-toerana izay hetsika manondrotra ny fandrosoana, sarotra ho an’ny mpanjifa no tsy hikaroka ny tombontsoany eo am-pividianana. Efa nilaozana ilay fanaratsiana ny an’ny tena amin’ilay fitenenana manamavomavo be ihany hoe vita gasy. Tsy masina an-taniny hono. Any ivelany koa misy fomba filaza mitovy amin’ izay, tsy misy mpaminany hahazo fahatokisana eo anivon’ny mpiray monina aminy. Na izany aza tsy hisy izany fandrosoana izany raha ny an’ny tena indray no atositosiky ny fanjakana.
Ny famokarana eto an-toerana dia sarotra ihany vao afaka hizaka ny fifaninanana amin’ny avy any ivelany. Na eo aza ny tsy fisian’ny vesatry ny fitaterana fiampitana ranomasina, na eo aza ny fahamoran’ny karaman’ny mpiasa raha ampitoviana amin’ny any ivelany, dia angamba misy antony hafa manambana mikasika ny fahafahana mifaninana eo amin’ny sehatry ny tsena. Ohatra izao ireo rano amidy an-tavoahangy, kely dia kely ny elenelam-bidy amin’ny avy any ivelany, nefa eto an-toerana no tovozina ilay rano, tsy nitety ranomasina ny vokatra, tsy hita ho lazaina hoe avo ny karaman’ny mpiasa ao amin’ilay orinasa famokarana. Aiza no vesatra manakana ny fampidinam-bidy tsy ho zakan’ny mpifaninana ? Sao tafahoatra loatra ny tombom-barotra tetehana ? Vola anefa io tsenan’io rano fisotro io. Rano iray tavohangy sy vary iray kilao no mitovy vidy. Aiza anefa ny asa famokarana vary. Sento tokana sisa no an’ny mpamboly.
← Us et coutumes : cote d’alerte (NewsMada)
Rallye terre de Lozère : abandon d’Andry R (NewsMada) →